Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo dib ugu soo laabtay Muqdisho | Sagal Radio Services
Sagal Radio Services • News Report • September 14, 2019
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kadib 13 maalin oo safaro shaqo uu ku kala bixiyay dowlad gobaleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed.
Wasiirro, Xildhibaanno iyo mas’uuliyiin kale ayaa Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo wafdiga la socda kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cabdulle Cusmaan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa intii Galmudug uu joogay, waxa Dhuusamareeb ka furay shirka dib-u-heshiisiinta ee looga tashanayo aayaha iyo dib-u-dhiska Galmudug, Caaduudwaaq waxa uu ka dhagax dhigay dhisme lagu kordhinayo jaamacadda ummadda, waxa uuna sidoo kale dhammeystiray geeddi socodkii nabadeynta bulshada Xeraale iyo Huurshe oo lagu guuleystay in heshiis nabadeed ay kala saxiixdaan.
Mudane Xasan Cali Khayre ayaa intii uu joogay Koonfur Galbeed waxa uu la kulmay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen), iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, oo uu ka dhageystay baahiyaha ay qabaan si loo daboolo, waxa uuna dhagax dhigay mashaariic horumarineed, isaga oo dowlad gobaleedka Koonfur Galbeed ku wareejiyay dhaqaale lagu horumarinayo garoomada kubbadda cagta Dr. Ayuub iyo Dr. Waaberi ee Baydhabo iyo Xudur.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale Koonfur Galbeed, kula kulmay safiirrada dalalka Saaxiibka la ah Soomaaliya, wakiillada beesha Caalamka iyo saraakiil kale oo ka socota bangiga adduunka iyo Qaramada Midoobay, oo uu kala haday in ay Soomaaliya kala shaqeeyaan ka guul gaaridda horumarka ay dooneyso in ay ku tillaabsato si ay u gaarto dib-u-kabasho dhameystiran.